I-Holiday Panic - Isikhathi Somphakathi Neselula | Martech Zone
I-Holiday Panic - Isikhathi Somphakathi Neselula
NgoLwesithathu, Okthoba 30, 2013 NgoLwesine, ngo-Okthoba 31, 2013 Douglas Karr
Siyazi ukuthi akusiwo uNovemba okwamanje, kepha amaholidi asondela ngokushesha kubamakethi. Ukukusiza ukuthi uthole ukumaketha kwakho kwamaholide ngegiya, i-Offerpop ihlanganise lokhu I-infographic ye-Holiday Panic nabo bonke izitayela zamaholide nezenhlalo uzohlangana nale sizini.
Cishe uhhafu wabo bonke abathengi bazosebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuthola imibono yezipho ezihlukile neziphesheli zeholide ezayo. Ngabe usuwenzile uhlelo lweholide okwamanje? Ufake ezenhlalo nezamaselula kuhlelo lwakho?
Tags: Ulwesihlanu olumnyamaI-christmasukuhlela amaholideukuthengiswa kwamaholideinfographicukubonga